Svalbard, ebe di anya, oyi na ebe mara mma | Akụkọ Njem
Svalbard, ebe di anya, ebe oyi juru ma di nma
Mariela Carril | | Norway, Ihe ị ga-ahụ
Okporo Even maara aha agwaetiti a? Ọ bụghị? Mgbe ahụ were map ụwa geopolitical ma lee ugwu nke ọma anya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ osisi ahụ. Ọ bụ n'ezie agwaetiti nke dị n'etiti ụsọ mmiri Norway na North osisi n'onwe ya, ya mere ọ na-ajụkarị ebe a.
Ọ bụ ebe tere aka ma ọ dịghị ihe na-emegide onye ọbịa ahụ ma ọ bụrụ na oyi atụghị gị egwu, akpịrị na-akpọ gị nkụ maka njem na obere ebe amachaghị nke ga-enye gị ncheta na akwụkwọ ozi anaghị echefu echefu, ka anyị hụ ihe ị ga-eme na Svalbard.
1 Agwaetiti ndị dị n'ebe ugwu
2 Njem nleta Svalbard
Agwaetiti ndị dị n'ebe ugwu
Ha bụ ndị Norway na eze ebe ọ bụ na 1920 na nke otu naanị mmadụ atọ bi na: Hopen, Bear Island na Spitsbergen nke bụ agwaetiti bụ isi. Ha nwere ngụkọta nke ihe karịrị 62 puku square kilomita. Enwere puku mmadụ atọ bi na ya ma ihe karịrị puku abụọ bi na ya Ogologo afọ, na Spitsbergen na ọ bụ ebe a kemgbe ebe gọọmentị na-arụ ọrụ.
Agwaetiti ahụ nwere n'etiti ndị ọbịa ya kasị ochie bụ Vikings dị egwu na enwere ọtụtụ ihe odide dị ọtụtụ narị afọ nke nwere ike ịgụnye ya n'okpuru aha ọzọ ma ọ bụ dịka ntụnye, mana ọ bụ na 1596 ka Barents, onye Dutch, rutere ebe ahụ.
Agwaetiti dịziri mgbe ahụ isi nke Dutch whaling ọrụ, ihe omume nke dịworo ogologo oge, ọ bụ ezie na ọ bụ n'àgwàetiti raara nye Ngwuputa na taa ọ bụghị naanị na Norway na-arụ ọrụ kama ụlọ ọrụ si n'akụkụ ụwa niile.
Ọ bụrụ na mmadụ elee anya n’agwaetiti ndị ahụ na map ahụ, mmadụ na-eche ọnọdụ ihu igwe kpụkọrọ akpụkọ, ma n’ezie, e nwere ebe ndị ọzọ na-ajụkarị oyi n’ụwa. N'oge oyi, nkezi dị -14 .C ma n’oge ọkọchị, ọ dị ụkọ na ọ karịrị 6 ma ọ bụ 7 ºC. Echere m, na ndị okpomọkụ ọ bụ oge oyi! Yabụ, weta uwe na-ekpo ọkụ, igwefoto dị mma, laptọọpụ iji budata ọtụtụ narị foto ị ga-ewere ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọtụtụ kaadị ebe nchekwa.
Njem nleta Svalbard
Zọ kachasị esi aga agwaetiti bụ Site na ụgbọ elu na n'ezie ọnụ ụzọ dị n'ihu bụ Spitsbergen. Ọ bụrụ na ị bụghị onye norwegi Ikwesiri iwere paspọtụ gị ee maọbụ ee ọma agwaetiti dị na mpụga mpaghara Schengen. Echefula ya!
Enwere ụgbọ elu SAS na Longyearbyen kwa ụbọchị na nkwụsị na Tromso. Gbanye oge dị elu, site na March ruo AugustEnwere ụgbọ elu dị iche iche kwa ụbọchị site na Oslo. Ọnụego ya dịgasị dabere n’ụbọchị izu ị gara. Flightgbọ elu ahụ na-apụ Oslo ma rute mgbe ọ gachara awa atọ njem, ọ bụrụ na ịpụ na Tromso ọ bụ otu awa na ọkara.
Na ihe mgbu nke oyi, ka anyị hụ ihe ebube agwaetiti ndị ahụ ga-echere anyị n'oge ọkọchị: njem njem ụgbọ mmiri, njem njem, nkịta na-agba ịnyịnya, ịchụ nta fosil, kayak, ịgba ịnyịnya, ịgba ịnyịnya ígwè, njem ụgbọ mmiri, njem njem azụ na ọdịdị nke ụwa ọzọ. Ọ bụghị ihe ọjọọ.
Njegharị nwere ike ịnwụ awa ma ọ bụ ụbọchị ma jiri ụkwụ ma ọ bụ kayak mee ya. N'oge ọkọchị mgbe ụbọchị dị ntakịrị, a na-ahazi njem mmụta n'akụkụ ugwu ugwu nke Spitsbergen ma ọ bụ Prins Karls Forland, mpaghara gburugburu Okechukwu. A na-ahazi otu dị iche iche ma gị na ụlọikwuu na-eme njem ụbọchị abụọ. O doro anya na enwere ụlọ ọrụ na-elekọta ihe niile.
N'aka nke ọzọ, njem njem kayak na-abawanye, n'etiti ụbọchị anọ na asatọ. A maara mpaghara dị ka Dickson- / Eckmansfjorden, Billefjorden, Krossfjorden ma ọ bụ Kongsfjorden. Ndị ọrụ njegharị na-enye ngwugwu kayak ahụ na uwe pụrụ iche achọrọ. Ị nwere ike gaa na glaciers na kayak n'etiti ha.
Na njegharị nke trekking gụnye rị ugwu (Trollsteinen, Nkume Troll), banye n’ọgba ice (ebe ị nwere ike ịnọ abalị), hụrụ anụ ọhịa n'etiti glaciers na fjords na ọbụna oge ụfọdụ na-agabiga obodo ochie Russia (Ndị Russia nọ na agwaetiti ndị ahụ ruo n'afọ 90, na-erigbu ụfọdụ ebe a na-egwupụta akụ). Ọ bụrụ na ị dị jụụ irughari bu uzo ozo.
Enwere ụgbọ mmiri ọkara otu ụbọchị ma ọ bụ karịa kpomkwem ka ụfọdụ Obodo ndị Russia, ndị nke Pyramiden na Barentsburg, na-agafe n’Ugwu Isfjord mara mma na glaciers pụrụ iche. Ngwuputa amụọla ọtụtụ ebe obibi, ụfọdụ ka bi ebe ndị ọzọ ebighị, ya mere ọ bụ maka ịmata ha.
Dịka ọmụmaatụ, otu nke bụ ọnụ ụzọ ámá Arctic bụ Na-Alesund: Ọtụtụ njem ndị a hapụrụ ebe a, gụnyere nke Roald Amundsen, nwoke mbụ mara okporo osisi abụọ ahụ.
Ma, a ghaghị ime ihe niile n'èzí? Ọ bụ echiche! Maghị ebe dị otu a kwa ụbọchị. Mmetụta nke ịnọ n'okpuru igwe ndị a aghaghị ịbụ ihe ịtụnanya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọzọ ị nwere ike ịmata ihe Ebe nkiri Svalbard nke akụkọ okike na ọdịbendị ga-enyere gị aka ịmara ọgaranya nke agwaetiti (yana nnukwu obodo ya pola bea na whale, echekwarala), or the North osisi Expedition Museum, chọọchị nke isi obodo, nke ugwu nke ụwa, ma ọ bụ, lee gị anya, Svalbard Distillery ebe dị mma na nke ọhụrụ Kelechi.
Nkwado: mara ya Azụ m 3: isi obodo nke agwaetiti ndị ahụ agaghị abụ ihe ọ na-enweghị ọrụ ngwuputa ala malitere na 1906. Onye America a na-akpọ John Munro Longyear na-erigbu ebe a (yabụ aha obodo ahụ). Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, ọ gafere n'aka ndị Norway, ya na ndị ọzọ. All ma e wezụga otu na-emechi na si na-erigbu ndị nke ikpeazụ kol na-enweta n'ịwa ọkụ eletrik na obodo.
Iji gosipụta njem nlegharị anya akụkọ ihe mere eme bụ na enwere njem nke Mine 3, nke m bụ malitere mmepụta na 1971 wee mechie na 1996. Ga-ama akụrụngwa eji, ụlọ ọrụ ya na ị ga-ahụ ihe niile dịka ọ dị mgbe ndị na-egwupụta akụ hapụrụ ihe ha wee pụọ, ghara ịlaghachi.
Njegharị ahụ na-amalite n'elekere itoolu nke ụtụtụ wee gwụ na 9 elekere. Ogologo oge, mana ha na-akpọrọ gị na họtel na ọbụlagodi, ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike isi na nke m gaa na ọdụ ụgbọ elu.
Ha na-enye gị uwe onye na-egwuputa ihe, isi mkpuchi na ikike ị ga njem 300 mita n'ime ugwu. Njegharị ahụ bụ na bekee na norwegian. Ndụmọdụ ọzọ: gbalịa ịnweta oge n'efu na Longyearbyen Tourist Office ha na-enye ndị ọbịa igwe kwụ otu ebe n'efu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ebe a na Norway bụ ihe ịtụnanya maka ndị hụrụ okike n'anya. Nhọrọ ọzọ na ebe dị anya ma dị egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Norway » Svalbard, ebe di anya, ebe oyi juru ma di nma
5 Pụrụ iche tụrụ ileta na Galicia
Mara Ireland na ụbọchị 8 site na euro 344